कर्णाली प्रदेशमा किन किताब खोज्दै छ प्रहरी ? - नेपाल समय
कर्णाली प्रदेशमा किन किताब खोज्दै छ प्रहरी ?
सुर्खेत- तपाईंसँग कुनै प्रेरणादायी र जीवन उपयोगी किताब छ ? सकारात्मक सन्देश दिने त्यस्ता किताब पढेर कोठामै थन्काउनुभएको छ ? छ भने ती किताबलाई सीधै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पठाइदिनोस् ।
तपाईं जुनसुकै कुनामा भए पनि हुलाक वा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा पुगेर ‘महेशविक्रम शाह, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत’ को ठेगानामा पठाइदिनोस् । किनकि विगत एक महिनादेखि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अभियान बनाएर जीवन उपयोगी किताब खोजिरहेको छ ।
तपाईंले किताबहरू पठाइदिनुभयो भने प्रहरीलाई सानो सहयोग मात्रै हुने छैन कुनै एउटा बन्दकोठामा पट्यार लाग्दो जिन्दगी बिताइरहेका त्यस्ता मानिसको उद्धार हुनेछ । जेलको चिसोमा जिन्दगीलाई धिक्कार्दै बसेका कैदीहरुको दिमागमा सकारात्मक सन्देश मिल्नेछ । कुनै समयको गल्तीका कारण वर्षाैंदेखि परिवारबाट अलग बस्नुपर्दा काल कुरेर बसिरहेका कैदीलाई थोरै भए पनि बाँच्ने साहस मिल्नेछ ।
तपाई‌ले दिएको एउटा सानो किताबले कसैको जीवन सकारात्मक दिशामा मोडिनेछ । भन्नुको अर्थ जेल सजाय भोगेर फर्किएपछि त्यस्ता व्यक्ति फेरि जेलको ढोकासम्म पुग्ने छैनन् । त्यही किताबकै कारण जेल जीवनपछि समाजमा केही गर्छु भन्ने आँट आउनेछ । हो त्यही भएर यस्ता जीवन उपयोगी र प्रेरणादायी किताबहरु कर्णाली प्रदेश प्रहरीले खोजिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका दसवटै कारागारका लागि प्रहरीले किताबको खोजी अभियान थालेको हो । विगत एक महिनादेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी महेशविक्रम शाहको संयोजकत्वमा सुरु भएको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘कारागारलाई किताब अभियान उपसमिति’ गठन गरिने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले अभियान थप प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय स्तरबाट अभियान सञ्चालन गर्ने डिआइजी शाह बताउँछन् ।
प्रदेशका १० वटै जिल्लाका कैदीहरुले जीवन उपयोगी किताब मागेपछि प्रहरीले यो अभियान थालेको हो । कैदीहरुलाई उत्प्रेरणा, उत्साह र जीवनबारे बुझाउने पुस्तकहरू व्यवस्था गर्ने प्रहरीको योजना छ ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियानअन्तर्गत थालिएको यो अभियानले कैदीहरुलाई नयाँ बाटोमा डोर्‍याउने प्रहरीको अनुमान छ । ‘किताब पढौं, जीवन बदलौं’ भन्ने मूल नारासहित सञ्चालित अभियानले कैदी र थुनुवालाई असल नागरिक बनाई समाजमा घुलमिल गराउन मद्दत पुग्ने प्रहरीको अपेक्षा छ । प्रहरीको यो अभियान सफल बनाउन कर्णालीका नागरिक अगुवा र समाजसेवीलगायतले साथ दिएका छन् ।